Kooxaha dembilayaasha oo weerar ku haya booliska dalkan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sbuucyadii ugu dambeeyay ayaa dhowr goob oo boolisku saldhig ku leeyahay waddanka weerar lagu soo qaadaay. sawir: Johan Nilsson/TT
Kooxaha dembilayaasha oo weerar ku haya booliska dalkan
La daabacay måndag 30 oktober 2017 kl 10.18
Sannadkan gudahiis keliya ayaa shan jeer la weeraray dad boolis ah iyo goobaha ay saldhiga ku leeyahiin.
Sabtidii ina soo dhaaftay ayaa guriga nin boolis ah iyo reerkiisi rasaas lagu furay iyago hurda. Hasayeeshe Sven Granath oo culuunta dembiyada ku takhasuusay ayaa sheegey in aaney jirin cilmibaadhis caddeynaysa in ay kordheen weeraradan.
Usbuucyadii ugu dambeeyay ayaa dhowr goob oo boolisku saldhig ku leeyahay waddanka weerar lagu soo qaadaay. Tusaale ahaan laba todobaad ka hor ayaa la qarxiyay irrida booliska magaalada Helsingborg.
Sven Granath ayaa u jeeda in ay weeraradani xidhiidh la leeyahiin in booliska dalku horumar ka gaadheen ka hor taga kooxaha dembilayasha. Arrinkan ayaa cadho iyo xanaaq ku dhaliyay kooxahahan oo weeraradan u sameeynayaa si ay booliska uga aargoostaan. Ta kale, ayuu sheegay Granath, in ay hub haysashada kooxahani kor u kacday.
Markii saaka Sven Granath oo culuunta dembiyada ku takhasuusay barnaamijka P1 morgon lagu weeyadiiyay natiijada ay kooxahani doonayaan in ay weeraradan ka gaadhaan, ayuu yidhi:
-Waxeey rabaan in ay welwel iyo baqdin ku abuuraan bulshadda iyo nidaamka sharciga iyo caddaalada ka jirta waddanka.
Sannadka dambe ayey dawladda dalkan hogaamisa ku talo jirtaa in ciqaabka kor ugu qaadaan dadka gala dembiyada hubka sharci darrada ah. Hasayeeshe xisbiga mucaaradka ee Moderaterna ayaa ka soo hor jeeda hindisahan.